Max Myanmar Holding Co., Ltd. ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော် နှင့် Japan Bank For International Cooperation (JBIC) မှ တာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံ
Max Myanmar Holding Co., Ltd. နှင့် AYA Financial Group ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်သည် ၂၀၁၈ခုနှစ် မေလ ၂၃ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ ၊ ပြည်လမ်းရှိ Novotel Yangon Max Hotel ၌် ဂျပန်နိုင်ငံမှ Bank Cooperation တစ်ခုဖြစ်သည့် Japan Bank For International Cooperation (JBIC) မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် တွေဆုံခဲ့ပါသည်။
Max Myanmar Holding Co., Ltd. နှင့် Mitsui Co., Ltd. တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
Max Myanmar Holding Co., Ltd. နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Mitsui & Co., Ltd. တို့သည် ၂၀၁၈ခုနှစ် မေလ ၂၂ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းရှိ Novotel Yangon Max ဟိုတယ်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးနွေးထွေးစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
Max Energy နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး ၂၀၁၈
Max Energy Annual Meeting 2018 ကို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မေလ (၁၈) ရက်နေ့တွင် မက်စ်မြန်မာရုံချုပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မက်စ်မြန်မာလုပ်ငန်းစု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်မှ အမှာစကား ချီးမြှင့်ပြောကြားကာ ဆထက်ထမ်းပိုး ပိုမိုကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားရန် နှင့် နေရာဒေသအလိုက် သင့်တော်လိုက်ဖက်မည့် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှုများကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သွားရန် လမ်းညွှန်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၆ -၂၀၁၇ စည်းကြပ်နှစ်အတွင်း ၀င်ငွေခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံးထမ်းဆောင်စာရင်းဝင် Max Energy
၂၀၁၆ -၂၀၁၇ စည်းကြပ်နှစ်အတွင်း ၀င်ငွေခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံးထမ်းဆောင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းရှင်များအား မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုလွှာ ချီးမြှင့်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် Max Energy အနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အဆင့် (၁၂) နှင့် ဝင်ငွေခွန် အဆင့် (၅၀) တို့ဖြင့် အများဆုံး အခွန်ထမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့အတွက် အထူးပင် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ Max Energy ၏ ကောင်းခြင်းဂုဏ်သတင်းအပြင် အရည်အသွေးနှင့်အချိန်အတွယ် ပြည့်ဝခြင်းကိုလည်း ဆက်လက်၍ ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကတိပြုအပ်ပါသည်။
မက်စ်မြန်မာ ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်သည် Sumitomo Corporation Asia & Oceania Pte., Ltd. ၏ President & CEO ဖြစ်သူ Mr. MASAO SEKIUCHI နှင့်တွေ့ဆုံ
ဂျပန်စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် Sumitomo Corporation, Japan၏ senior Managing Executive Officerနှင့် Sumitomo Corporation Asia & Oceania Pte.Ltd. ၏ president & CEO အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် Mr. MASAO SEKIUCHI သည် ၂၀၁၈ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် Max Myanmar Holding Co.,Ltd. သို့ လာရောက်၍ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်နှင့် တွေ့ဆုံကာ စီးပွားရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
မက်စ်ဘိလပ်မြေစက်ရုံ၏ (၈) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကျင်းပ
မက်စ်ဘိလပ်မြေစက်ရုံ၏ (၈)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကို လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ တောင်ဖီလာဒေသရှိ မက်စ်ဘိလပ်မြေစက်ရုံတွင် ၁၉ရက်၊မတ်လ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် တွင် ဖိတ်ကြားထားသော ဂုဏ်သရေရှိ ဧည့်သည့်တော်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ အကြီးအကဲများ၊ စက်ရုံမှတာဝန်ရှိသူများ ၊ စက်ရုံဝန်ထမ်းများ နှင့် မိသားစုဝင်များ ဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ASEAN-Australia CEO Forum စားပွဲဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲနှင့် Plenary Session သို့ ဦးဇော်ဇော် တက်ရောက်
Max Myanmar ကုမ္ပဏီများ အုပ်စု ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်သည် ၂၀၁၈ မတ်လ ၁၇ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၁း၃၀ နာရီတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့ International Convention Centre တွင် ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် ASEAN-Australia Special Summit ၏ CEO Forum သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါ Forum ၏ ခေါင်းစဉ်ခွဲဖြစ်သည့် Infrastructure Roundtable စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ASEAN - Australia Business Summit CEO Forum သို့ရောက်ရှိနေသည့် မက်စ်မြန်မာ ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော် အာဆီယံ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်
သြစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြု လုပ်မည့် ASEAN-Australia Business Summit CEO Forum သို့ တက်ရောက်ရန် ရန်ကုန်မြို့မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ခွာသွားသည့် မက်စ်မြန်မာအုပ်စု ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်သည် ၂၀၁၈ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ၁၁နာရီ ၄၅မိနစ်တွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nicholas Coppel တို့ တွေ့ဆုံ
ASEAN - Australia Business Summit CEO Forum သို့ တက်ရောက်မည့် Max Myanmar Group of Companies ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်သည် ၂၀၁၈ခုနှစ် မတ်လ (၅)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းရှိ နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်၌် မြန်မာနိ်ုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nicholas Coppel၊ အဖွဲ့ဝင် Mr. Jeff Turner တို့နှင့် ရင်းနှီးနွေးထွေးစွာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။